iphone 6splus ( 32GB ) အား မင်္ဂလာတောင်ညွန့် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
iphone 6splus ( 32GB )
ရောင်းချသူ: min min
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : ၇၃ရက်​
ကြည့်သူအရေအတွက်: 61 (+1)
Apple တွေဈေးထက်ကျသွားပြီးဟေ့ ........
အထူးဈေးရောင်းပွဲတော် နှင့်အထူးလက်ဆောင်လာပြီဗျ ။ အရောင်အစုံရမယ်နော်။
#CB Bank အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ၀ယ်ယူအားပေးနိုင်ပြီးနော်။
၁။ ( ၆ ) လအရစ်ကျစနစ်
၂။ ( ၁၂ ) လ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်သော စနစ်ဖြင့် ၀ယ်ယူအားပေးနိုင်ပြီးနော်။
IPhone Brand New Packing ဖုန်းများလိုချင်ရင်
IDOL MOBILE ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ ခင်ဗျ
1️. HD Premium မှန်မကွဲ
2. Silicon Cover Pro
3. Myanmar Font and Keyboard သွင်းပေးခြင်း
4. HD Games And Applications များသွင်းပေးပါတယ်
5. Apple Ring Holder
6. Apple ID with Gmail
7. IPhone ၀ယ်ယူသူတိုင်းအတွက် 20% discount For Accessories
အမှတ် - ၉၆ ၊ မြန်မာဂုဏ်ရည်လမ်း ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့ နယ် ရန်ကုန်
* ကြိုက်နှစ်သက်မည့် ဟန်ဆက်တွေ့ရှိပါက ဆိုင်ဖုံးကိုဆက်ပြီး စုံစမ်းမေးမြန်း နိုင်ပါသည်။*
I Phone6Grey / 64GB
Meizu M6note 3.32gb
အမည်: iphone 6splus ( 32GB )
ရန်ကုန်တိုင်း , မင်္ဂလာတောင်ညွန့်